Ihe mere m ji adụ ndị ụlọ ọrụ SaaS ọdụ ka ha ghara iwulite onwe ha CMS | Martech Zone
Otu onye ọrụ ibe m a na-akwanyere ùgwù kpọrọ m na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-arịọ maka ndụmọdụ ka ọ na-agwa otu azụmahịa na-ewu usoro ntanetị ya. Ejikọtara nzukọ a nke ndị mmepe nwere ọgụgụ isi ma ha na-eguzogide iji usoro njikwa ọdịnaya (CMS)… Kama ịkwọ ụgbọala iji mejuputa ngwọta nke ụlọ ha.
Ọ bụ ihe m nụrụ tupu… m Elezie nye ndụmọdụ megide ya. Ndị mmepe na-ekwenyekarị na CMS bụ naanị tebụl nchekwa data ebe edebere ọdịnaya yana enwere ike imelite ya dịka ọ dị mkpa. Mana ha na-efu ọtụtụ narị atụmatụ nke CMS na-enye. Ghara ikwu ihe gbasara azụmahịa dị mkpa maka nzukọ a.
Kedu ihe kpatara na ekwesighi Iwube CMS?
Nchọgharị na Ike Social Media - Edere m Njirimara Ọ bụla Usoro Ọdịnaya Ọdịmma Ga-enwerịrị Maka Njikwa Nchọgharị Nchọpụta maka otu azụmaahịa nke ndị mmepe ya chọrọ ime nke a. Isiokwu ahụ na-agagharị na ihe niile usoro njikwa ọdịnaya ga - - site na saịtị XML, site na onyonyo gosipụtara featured dị mkpa iji kwalite ma jikọta ọdịnaya gị na ntanetị niile. Hapụ ihe ọ bụla n'ime atụmatụ ndị a na-eme ka ụlọ ọrụ gị nwee nsogbu megide ndị asọmpi gị. Toghara ịkọwa ihe dị mkpa na-agbanwe agbanwe nke nyocha na mmekọrịta - yana ụzọ ọhụrụ iji bulie, rụọ ọrụ, bulie, ma jikọta ọdịnaya gị na ndị na-ajụ ase na ọwa ndị ahụ.
Ibu ụzọ Development - Ka ị na-eweta usoro ịntanetị na ndụ, ikpo okwu gị anaghị adị eme. Ugsmụ ahụhụ, atụmatụ, njikọta… ọbara gị bụ ebe ikpo okwu gị n'ịntanetị. N'ihi nke a, a ga-etinyerịrị usoro njikwa ihe ị na-arụ nke ọma karịa listi kachasị mkpa gị. Dika ndi ahia gi na-acho ime ka ihe di nma ma kwalite ire ahia ka ha ghara igbochi ya. N'ihi ya, ahịa na ire ahịa enweghị ike ị nweta ike ha zuru oke. Mmezu nke CMS nke anakwere ebe niile pụtara na enwere nkwado na nkwalite na-abịa na ya. Businesseslọ ọrụ ndị ahụ na-akwado CMS nwere ya ha mkpa, na azụmahịa gị nwere ike na- gị ikpo okwu dị ka ihe kacha mkpa gị.
Ọ bụ ego na-adịghị mkpa - Kedu ihe kpatara ị ga-eji gbalịa ịmaliteghachi ihe ewugoro? Ihe ikpo okwu dika WordPress nwere ikike dị egwu na ụda mgbanwe. Ọ bụrụ na ndị otu gị chọrọ, ọ nwere ike iji WordPress dị ka a Enweghị isi CMSEbe ndị ahịa gị nwere ike iji ike ya niile, mana ndị otu mmepe gị nwere ike iji WordPress API bipụta ma tinye ya n'ime ikpo okwu gị. WordPress nwekwara ike ahu nagide Single ịrịba ama-On (SSO) ike… ịkekọrịta usernames na okwuntughe gị n'elu ikpo okwu. WordPress nwekwara ike kwadoro na subdirectory… ma ọ bụ gị na ngwa nwere ike ịbụ iji agbara zighachi akwụkwọ nnọchiteanya.
Chee echiche banyere ụfọdụ ọnọdụ ị ga-achọ ịzụ ndị ahịa gị.
Ikekwe ịchọrọ ịmụba ọdịnaya peeji, gbakwunye ngalaba, ma tinye ogidi… CMS gị ọ nwere mgbanwe ahụ?
Ikekwe ha chọrọ itinye ndebanye aha ihe omume… CMS gị ọ nwere ikike izipu njikọ usoro ihe omume na ncheta?
Ikekwe ịchọrọ ịbata ebook n'efu, ndị otu ahịa gị nwere ikike maka popup na ebumnuche ọpụpụ yana ịhazigharị mpaghara ndebanye aha?
Ikekwe ịchọrọ ịkewapụta onye ahịa gị site na okporo ụzọ ị na-atụ anya ya - ị nwere ụzọ ị ga-esi kee ụdị okporo ụzọ abụọ ahụ na nyocha iji chọpụta mmetụta ahịa gị?
Ikekwe ị chọrọ iji akpaghị aka gị akwụkwọ akụkọ na iwekota gị ọhụrụ blog posts nke mere na ị na-agaghị ewu gị email kwa izu… ị nwere RSS ndepụta na customizable maka ime nke ahụ?
Enwere ọtụtụ narị ọnọdụ nke na-achọ mgbanwe n'akụkụ nke CMS gị iji mejupụta ọdịnaya gị na mbọ ahịa gị. Ndị otu mmepe gị ga - enwe oge siri ike ijide CMS nke oge a nke nwere ọtụtụ ndị mmepe oge niile na - ekwusi ike ma na - akwado ike CMS ha… na plethora nke isiokwu na ndị mmepe mgbakwunye na-agbasa ikike ndị ahụ
Ma eleghi anya i kwesiri ijikọ CMS
Enweela m ihe kpatara ya iwu CMS. Otu echiche nke akpọghị n’elu bụ ohere na - abịa site na ijikọ isi ikpo okwu na CMS.
Otu ụlọ ọrụ mụ na ha rụkọrọ ọrụ nwere ederede dị mfe enwere ike ịgbakwunye na saịtị gị iji mata azụmaahịa na-abata na saịtị ahụ. M mepụtara WordPress ngwa mgbakwunye na-akpaghị aka na-agbakwunye akwukwọ wee nye echiche na WordPress maka ha. Mgbe etinyere ngwa mgbakwunye ahụ na WordPress nchekwa, nnabata ha arịgoro. N'ihi gịnị? N'ihi na ndị ọrụ WordPress nọ na-achọ plugins na-enye atụmatụ ha nyere.
Ọ bụrụ na ndị mmepe gị wuru nnukwu ngalaba nhazi jikọtara ya site na WordPress Plugin, ị na-agbasawanye mbata SaaS gị. Mgbe ha nwere ọtụtụ nde mmejuputa atumatu n'akụkụ ụwa niile ma ị na-achọ ịbawanye ọhụhụ gị direct ndekọ CMS nwere ike ịbụ nnukwu ebe iji kwalite ikpo okwu gị.
Debe ihe mmepe gị n'efu iji kwado ndụ nke ego ụlọ ọrụ gị na-enweta - ikpo okwu gị. Mejuputa usoro njikwa ihe omuma iji mejuputa usoro ahia gi.
Tags: iru vs zụtaCMScms na seocms na mgbasa ozicms mmepeusoro njikwa ọdịnayaEnweghị isicms enweghị isilaa azuwordpress api